Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo hakiyay banaanbax lagu waday inuu maanta dhaco – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo hakiyay banaanbax lagu waday inuu maanta dhaco
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) ayaa hakiyay banaanbax lagu waday inuu maanta ka dhaco Daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho.
Banaanbaxaasi ayaa la sheegayaa inuu uljeedkiisu ahaa in looga horjeesto xubnihii lagu kordhiyay Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo aan wax xubno ah laga siinin gobolka Banaadir.
Guddoomiye Boorsaani iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo maalintii shalay shir deg-deg ah ka yeeshay arrintaan ayaa go’aamiyay in bannaanbaxyo nabadeed laga bilaabo caasimadda, si loo muujiyo diidmada dadka gobolka Banaadir ee dhismaha Aqalka sare.
Warar hoose aynu ka heleyno xarunta gobolka Banaadir ayaa sheegeysa in wasaaradda arrimaha gudaha ay faragelin toos ah ku sameeysay qorshaha banaanbaxaasi, kadib markii ay guddoomiyaha gobolka Banaadir amar ku siisay in banaanbaxaasi la hakiyo, taas oo sabab looga dhigay in xaalad amni iyo qalalaase ay ka dhalan karaan.
Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale) ayaa inta badan la sheegaa inuusan qaadan karin go’aan aanay raali ka aheyn madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna maalintii shalay si kulul uga hadlay xuquuqda gobolka Banaadir ee la iska indha tiray.